Dadkii iska jajabiyay Falasada Hoodi Shaaha oo Safaf ugu jira Dukaamada Si ay Mar kale u Soo iibsadaan | Raadgoob
Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Gaarisa iyo qeybo kale oo ka mid ah gobolka Waqooyi-bari Kenya oo maalmahaan iska jajabiyey Tarmuusyada shaaha ayaa hadda sheegay iney ku khasbanaadeen iney mar kale soo iibsadaan, maadaama aysan ka maarmin.
Muddo dhowr cisho ah waxaa socday burburinta loo geysanayay Tarmuusyada, ka dib markii la sheegay in ay ku jiraan kaniiniyaal dadka qaarkood ay aaminsanaayeen in cudurro laga qaadi karo.
Suuqa ugu weyn magaalada Gaarisa ee lagu magacaabo Suuq Mugdi ayaa saaka laga dareemayay saxmad, iyadoo dadku ay safaf ugu jireen dukaamada lagu iibiyo maacuunta, si ay mar kale Tarmuusyo u soo iibsadaan.
Dadweynaha ayaa ka cawday iney ku dhacday Tarmuus la’aan maadaama uu labadii maalmood ee la soo dhaafay socday ololaha Tarmuus jajabinta, kaas oo masuuliyiinta ay ku tilmaameen mid uu horseeday war ku-tiri-ku-teen ah.
Ruqiyo Yuusuf Ibraahim oo ka mid ah hooyooyinka ay arrintaan saameysay ayaa BBC-da ku tiri “aniga waxaan lahaa hal Tarmuus waana iska jabiyay, laakiin dariskeyga qaarkood waxay iska bur buriyeen labo labo Tarmuus”.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay sheegtay iney ka maarmi weysay isticmaalka Tarmuuska oo ay mar kale suuqa u soo doonatay.
“Markii hore dad ayaa i soo wacay oo igu yiri ‘Tarmuusyada waxaa ku jira kaniiniyaal cudurka kansarka laga qaadayo’, waana iska jabiyay halkii Tarmuus ee aan lahaa, laakiin markii ay sidaas i anfici weyday saaka waxaan imid Suuqa, halkaan ayaana mid kale ka iibsaday” ayay tiri.
Waxaa suuq yeeshay jalmadaha ama kirliga shaaha.
Lahaanshaha sawirka RAADGOOB.COM
Image caption Wax kaniiniyaal u eg oo la aaminay in ay ku dhex jiraan tarmuusyada.
Markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Tarmuusyada ay ku jiraan kaniiniyaal halis ah ayay dadka intiisa badan suuqa u doonteen kirliyada shaaha lagu kariyo, si ay shaaha ugu keydsadaan.
Arrintaas ayaa suuq cusub oo ganacsi u yeeshay kirliyada oo labadii maalmood ee la soo dhaafay si weyn looga iibsanayay dukaamada.
Mid ka mid ah ganacsatada maacuunta oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay iney dukaamada intooda badan ka dhamaadeen Kirliyada, maadaama si aad ah loogu xoomay.
Wuxuu sheegay in hadda dadku ay wali waydiinayaan kirliyada.
Sidee bay arrintan u arkaan ganacsatadu, maxaase sababay?
Ganacsatada qaarkood ayaa aaminsan in loollankii ganacsi ee caalamka ka jiray uu soo gaaray gobolka Waqooyi-bari Kenya.
Ganacsade magaciisa ku soo koobay Cabdiraxmaan ayaa BBC-da la wadaagay fikirkiisa ku saabsan in sababta ka dambeysa arrintaan ay tahay is jiid jiidka shirkadaha waaweyn ee alaabta soo saara.
“Waxay ila tahay in dhibkaan uu sababay tartanka ganacsi ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka, maadaama ay labadaas waddan yihiin kuwa ugu badan ee suuqa soo galiya maacuunta” ayuu yiri.
Dhanka kale Cabdi Jabaar Aadan Xasan oo maacuunta ku iibiya Suuqa magaalada Gaarisa ayaa qaba fikrad kale oo taas ka duwan.
“Waxaan u malaynaynaa iney arrintaas ku timid markii ganacsatada qaar ay ku bateen Tarmuusyada oo ay doonayaan in suuq loo yeelo, si markii la wada bur buriyo mar kale looga iibsado” ayuu yiri.
Shacabka isticmaala baraha xiriirka bulshada ayaa maalmahaan si weyn u hadal hayay jajabinta Tarmuusyada, iyagoo qaarkoodna ay shaaciyeen muuqaallo ay iska duubeen iyagoo Tarmuusyadooda burburinaya.